Google Now smartwatch is coming 'within weeks' - Izindaba Rule
I-Google Now SmartWatch liyeza 'kungakapheli amasonto’
NGEMVA yokufuna ZAWO of kumklami WIMM ngasekuqaleni kwalo nyaka, Google ubonakala setha ukumemezela kuqala yayo SmartWatch kungakapheli amasonto.
The project, codenamed “gem”, Kuthiwa ayehlome kusekelwe Google Now ukusebenza. Empeleni cishe kuyoba ezinwetshiwe WIMM One SmartWatch ukuthi is powered by Android, Nokho izinto esifana ngazo nalaba smartwatches eziningi kudinga uxhumano Bluetooth an smartphone ekhona Android noma Blackberry ukuba asebenze. Akucaci ukuthi idivaysi entsha izosebenza ngokuzimela, mhlawumbe usebenzisa iziqinisekiso Google ukuze uvumelanise ulwazi.
Naphezu khona owabe akukho nhlobo yesilwane kwaleli washi elisha, 9to5Android uye abachithanga sikhathi ekwakheni bhinqa-up of silindile ngokusekelwe kulokho owaziyo.
With the kwethulwa Android 4.4 Kitkat ne-Google iwuhlelo Nexus 5 smartphone ezingu away, kungenzeka ukuthi sizobe ukuthola i extra ukuphathwa ngesikhathi kwethulwa.
Market analysis ngokuqinile Juniper Research wathi ukholelwa the wearable idivayisi wemboni isethwe umlilo, izibikezelo i $ 18bn imakethe 2019, futhi ngenkathi okuningi we focus ubelokhu Google Glass, smartwatches sibonakale setha siyishaye big kakhulu.
Naphezu kwezimo ezidumazayo abhekana nazo abaningi models ezikhishwe kuze kube manje – ukukhumbula Sony Liveview? – kwakungase kuphela kulaba abahlanu zithatha oyedwa impumelelo ukushintsha indlela abantu kanye nezifiso nengalo esekelwe smart technology.
Ngaphezu kwalokho, ingxenye enkulu yocwaningo lwe-Google ku-Google Glass kungasetjentiswa e SmartWatch yayo, nakuba amathuba okuphinga kancane of looking like a poser earphone ongaziwa maphakathi Shoreditch High Street. m
Lesi sihloko, I-Google Now SmartWatch liyeza 'kungakapheli amasonto', is yedlanzana kusukela obuzayo futhi posted lapha nge imvume.
19106	0 Android, Bluetooth, Google, Google Nexus, obuzayo, zokhuni Ucwaningo, Shoreditch High Street, Smartwatch
← Amaphela Cyborg Ayikwazanga Scout ezindaweni eziyingozi PS4 idethi, zamanani nokutholakala →